SAWIRRO: Gudoomiye Mursal oo furay Kalfadhiga 4aad ee Baarlama... | Universal Somali TV
SAWIRRO: Gudoomiye Mursal oo furay Kalfadhiga 4aad ee Baarlamaanka Hirshabelle.
Guddoomiyaha golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Amb Mohamed Mursal Sheikh ayaa maanta si rasmi ah u furay Kalfadhigga 4aad ee Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle.
Guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa ugu horeyn ugu mahad celiyay madaxda Hirshabelle sida wafdiga uu hogaaminayo ay Magaalada Jowhar ugu soo dhaweeyeen.
“ Mudanayaal iyo marwooyin sharaf weyn ayay ii tahay inan maanta furo Kalfadhigga 4aad ee Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle, sidoo kale waxa rabaa inan aad idiin kaga mahad celiyo soo dhaweynta aad noo sameyseen aniga iyo wafdiga an hogaaminayo” ayuu yiri guddoomiyaha golaha shacabka.
Guddoomiyaha ayaa xildhibaanada Hirshabelle kula dardaarmay iney si wanaagsan u gutaan masuuliyadda saran, kana shaqeeyaan hormarinta shacabka ay matalaan.
“ runtii waxa idiin saaran masuuliyad weyn, waxa idiin kula dardaarmayaa inad dadaal badan sameysaan, sidoo kalena aad Kalfadhiggan shaqooyin badan qabataan” ayuu mar kale yiri guddoomiye Maxamed Mursal.
Waxa uu tilmaamay in guddoonka golaha shacabka uu diyaar u yahay inuu si dhaw ula shaqeeyo Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle.
Munaasabada furitaanka waxa goobjoog ka ahaa Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali C/llaahi Xuseen (Cali guudlaawe).
Sidoo kale munaasabada waxaa ka qeyb galay guddoomiyaha Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Sheekh Cismaan Barre Maxamed, guddoomiye ku xigeenka labaad ee Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Mowliid Xuseen Guhaad, Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo marti sharaf kale.
Kan-xigaMadaxweyne Farmaajo iyo Wafdi uu hogg...
Kan-horeGudoomiye Yariisoow: Shaqaalaha aan G...
39,219,432 unique visits